Tsy Mivadika sy Mamela Heloka i Jehovah | Fianarana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Catalan Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kambôdzianina Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Litoanianina Luo Malagasy Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Ndebele Ndonga Norvezianina Nzema Népali Oromo Ouzbek Pangasinan Poloney Portogey Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
“Tsara toetra sy vonona hamela heloka ianao, Jehovah ô, sady tena tsara fanahy sy be fitiavana amin’izay rehetra miantso anao.”—SAL. 86:5.
Ahoana avy no ampisehoantsika hoe tsy mivadika isika, toa an’i Jehovah?
Ahoana no hanahafantsika an’ilay toetran’i Jehovah hoe mamela heloka?
Nahoana ianao no tokony hiezaka foana mba hahafantatra sy ho tia kokoa ny toetran’i Jehovah?
1, 2. a) Nahoana no tiantsika ny mana-namana tsy mivadika sy mamela heloka? b) Inona avy no fanontaniana hovaliana ato amin’ity lahatsoratra ity?
INONA no atao hoe tena namana aminao? Hoy ny anabavy atao hoe Ashley: “Vonona hanampy foana ny tena namana, ary mamela heloka rehefa manao fahadisoana ianao.” Tiantsika rehetra ny hoe mana-namana tsy mivadika sy mamela heloka. Mahatsiaro ho tiana sy milamin-tsaina isika rehefa mana-namana hoatr’izany.—Ohab. 17:17.
2 I Jehovah no Namana tsy mivadika sy mamela heloka indrindra. Hoy ny mpanao salamo: “Tsara toetra sy vonona hamela heloka ianao, Jehovah ô, sady tena tsara fanahy sy be fitiavana amin’izay rehetra miantso anao.” (Sal. 86:5) Misy ifandraisany amin’ny hoe tsy mivadika ilay “fitiavana” resahina eo. Inona àry no dikan’ny hoe tsy mivadika sy mamela heloka? Ahoana no ampisehoan’i Jehovah an’ireo toetra mahafinaritra ireo? Ary ahoana no azontsika anahafana azy? Hamaly an’ireo isika izao. Hanampy antsika izany mba ho tia kokoa an’i Jehovah, ilay Namantsika akaiky indrindra, sy hifandray kokoa amin’ny mpiray finoana amintsika.—1 Jaona 4:7, 8.
TSY MIVADIKA I JEHOVAH
3. Inona no dikan’ny hoe tsy mivadika?
3 Ny olona mifandray akaiky matetika no lazaina hoe tsy mivadika, ary tafiditra amin’io toetra io ny hoe mifikitra mafy, azo atokisana, ary tsy miovaova. Manampy sy manohana foana ny olona tsy mivadika, ary tsy mba manary na dia amin’ny sarotra aza. Antsoina hoe “Ilay Tsy Mivadika” indrindra i Jehovah.—Apok. 16:5.
4, 5. a) Ahoana no ampisehoan’i Jehovah hoe tsy mivadika izy? b) Nahoana no mampahery antsika ny misaintsaina ny fomba nampisehoan’i Jehovah ny tsy fivadihany?
4 Ahoana no ampisehoan’i Jehovah hoe tsy mivadika izy? Tsy manary ny mpanompony tsy mivadika mihitsy izy. Nahatsapa an’izany i Davida Mpanjaka. (Vakio ny 2 Samoela 22:26.) Nitari-dalana sy niaro ary nanafaka azy foana i Jehovah, tamin’izy niatrika fitsapana. (2 Sam. 22:1) Tsapan’i Davida hoe tsy an-tendro-molotra fotsiny ny tsy fivadihan’i Jehovah, fa nasehony tamin’ny nataony mihitsy. Nahoana àry i Jehovah no tsy nivadika tamin’i Davida? Satria tsy nivadika taminy i Davida. Sarobidy amin’i Jehovah ny tsy fivadihan’ny mpanompony, ka tsy mivadika amin’izy ireo koa izy.—Ohab. 2:6-8.
5 Mampahery antsika ny misaintsaina ny zavatra nataon’i Jehovah mba hampisehoana hoe tsy mivadika izy. Hoy ny rahalahy atao hoe Reed: “Tena manampy ahy ny mamaky ny fomba nanampian’i Jehovah an’i Davida. Nisy fotoana izy niatrika olana lehibe. Mbetika izy niafina tao anaty lava-bato ary mbetika nitsoaka. Nanampy azy foana anefa i Jehovah. Tena mampahery ahy ny mieritreritra an’izany! Mampahatsiahy ahy izany hoe na inona na inona mitranga, ary na faran’izay mafy aza ny manjo ahy, dia ho eo foana i Jehovah hanampy ahy raha tsy mivadika aminy aho.” Azo antoka fa izany koa no tsapanao.—Rom. 8:38, 39.
6. Ahoana koa no ampisehoan’i Jehovah hoe tsy mivadika izy, ary nahoana izany no mahasoa ny mpanompony?
6 Ahoana koa no ampisehoan’i Jehovah hoe tsy mivadika izy? Manaraka ny fitsipika napetrany foana izy. Manome toky izy hoe: “Na mandra-pahantitrareo aza, dia tsy miova Aho.” (Isaia 46:4) Manaraka ny fitsipiny momba ny tsara sy ny ratsy foana izy rehefa manapa-kevitra, ary tsy miova ny fitsipiny. (Mal. 3:6) Hita hoe tsy mivadika koa i Jehovah, satria tanterahiny foana ny fampanantenany. (Isaia 55:11) Mandray soa amin’ny tsy fivadihan’i Jehovah àry ny mpanompony rehetra tsy mivadika. Nahoana? Satria rehefa miezaka mafy isika manaraka ny fitsipiny, dia hotanterahiny ny fampanantenany hoe hanome fitahiana antsika izy.—Isaia 48:17, 18.
TAHAFO I JEHOVAH KA AZA MIVADIKA
7. Ahoana no hanahafantsika an’ilay toetran’i Jehovah hoe tsy mivadika?
7 Ahoana no hanahafantsika an’ilay toetran’i Jehovah hoe tsy mivadika? Azontsika atao ny manampy ny olona miatrika zava-tsarotra. (Ohab. 3:27) Misy mpiara-manompo ve, ohatra, fantatrao hoe kivy satria nanao fahadisoana, na marary, na manohitra azy ny fianakaviany? Nahoana raha milaza “teny mahafinaritra sy mampionona” an’ilay olona? (Zak. 1:13) * Raha manao izany ianao, dia hasehonao fa “mifikitra noho ny rahalahy” ianao, izany hoe tena namana tsy mivadika.—Ohab. 18:24.
8. Ahoana no ampisehoantsika hoe tsy mivadika isika? Manomeza ohatra.
8 Manahaka an’i Jehovah koa isika, raha tsy mivadika amin’ny olona tiantsika. Manambady ve, ohatra, ianao? Azo antoka fa fantatrao hoe tsy tokony hivadika amin’ny vadinao ianao. (Ohab. 5:15-18) Tsy ampy anefa ny hoe tsy manitsakitsa-bady. Mila mitandrina koa ianao mba tsy hanao zavatra mety hahatonga anao hanitsakitsa-bady. (Mat. 5:28) Tsy mivadika amin’ny mpiara-manompo amintsika koa isika, raha tsy mifosafosa na manendrikendrika azy ireny. Tsy tokony hataontsika na dia ny mihaino resaka ratsy momba azy ireo aza.—Ohab. 12:18.
9, 10. a) Amin’iza isika no tena tsy tokony hivadika? b) Nahoana no mety ho sarotra ny mankatò ny didin’i Jehovah?
9 Amin’i Jehovah anefa isika no tena tsy tokony hivadika. Ahoana no ampisehoantsika an’izany? Mila miezaka isika mba hanana ny fomba fihevitr’i Jehovah, ka ho tia izay tiany ary hankahala izay halany. Tokony ho hita eo amin’ny fomba fiainantsika koa izany. (Vakio ny Salamo 97:10.) Vao mainka ho mora amintsika ny hankatò ny didin’i Jehovah, arakaraka ny hiezahantsika hanana ny fomba fisainany sy hitovy fihetseham-po aminy.—Sal. 119:104.
10 Marina fa tsy mora indraindray ny mankatò ny didin’i Jehovah. Mety ho voatery hiady mafy isika mba tsy hivadika. Mety ho te hanambady, ohatra, ny Kristianina mpitovo sasany, nefa tsy mahita vady mety aminy izy eo anivon’ny vahoakan’i Jehovah. (1 Kor. 7:39) Eritrereto, ohatra, hoe imbetsaka ny anabavy mpitovo iray no tadiavin’ny mpiara-miasa aminy hampidipidirina amin’ny lehilahy eritreretiny hoe metimety aminy. Mety hahatsiaro ho manirery ilay anabavy, kanefa miezaka mafy izy mba tsy hivadika amin’i Jehovah. Tena tiantsika ny rahalahy sy anabavy miezaka tsy hivadika toy izany, ary ohatra tsara ho antsika. Hahazo valisoa avy amin’i Jehovah izay rehetra tsy mivadika aminy ao anatin’ny sarotra.—Heb. 11:6.
‘Misy namana mifikitra noho ny rahalahy.’—Ohab. 18:24 (Fehintsoratra 7)
‘Mifamelà heloka tanteraka.’—Efes. 4:32 (Fehintsoratra 16)
MAMELA HELOKA I JEHOVAH
11. Inona no dikan’ny hoe mamela heloka?
11 Anisan’ny toetra tena mahafinaritra ananan’i Jehovah koa ny hoe mamela heloka. Ny hoe mamela heloka dia midika hoe mamindra fo amin’izay nanao zavatra tsy nety, raha tena mibebaka izy. Tsy midika izany hoe mankasitraka an’ilay zavatra ratsy nataony, na hoe mody tsy mahita an’ilay izy. Midika kosa izany hoe manapa-kevitra fa tsy ho tezitra amin’ilay olona intsony. Milaza ny Baiboly fa “vonona hamela heloka” i Jehovah, raha tena mibebaka isika.—Sal. 86:5.
12. a) Ahoana no ampisehoan’i Jehovah hoe mamela heloka izy? b) Inona no tian’i Petera holazaina rehefa nilaza izy fa azo vonoina ny fahotantsika?
12 Ahoana no ampisehoan’i Jehovah hoe mamela heloka izy? Milaza ny Baiboly fa “tena mamela heloka tanteraka” izy, izany hoe mamela amin’ny fony manontolo sady mamela mandrakizay. (Isaia 55:7) Ahoana no ahafantarantsika fa mamela heloka amin’ny fony manontolo i Jehovah? Diniho ny voalazan’ny Asan’ny Apostoly 3:19. (Vakio.) Nampirisika ny mpihaino azy ny apostoly Petera ao hoe: “Mibebaha, ka miverena.” Tena mibebaka ny olona iray raha manenina mafy noho ny ratsy nataony, ary tapa-kevitra ny tsy hamerina an’ilay fahotana intsony. (2 Kor. 7:10, 11) Raha tena mibebaka koa izy dia ‘hiverina’, izany hoe hiala amin’ilay fahotana ary hanao izay mampifaly an’Andriamanitra. Inona no ho vokatr’izany? Nilaza i Petera hoe ‘hovonoina’ ny fahotany. Ilay hoe ‘mamono’ dia avy amin’ny teny grika midika hoe “mamafa.” Rehefa mamela ny helotsika àry i Jehovah, dia toy ny hoe fafany ilay izy ka tsy hita intsony. Mamela antsika amin’ny fony manontolo izy.—Heb. 10:22; 1 Jaona 1:7.
13. Inona no toky ananantsika avy amin’ilay tenin’i Jehovah hoe: “Tsy hotsarovako intsony ny fahotany”?
13 Ary ahoana indray no ahalalantsika fa mamela heloka mandrakizay i Jehovah? Diniho ny faminanian’i Jeremia momba ny fifanekena vaovao nataon’i Jehovah tamin’ny voahosotra. Afaka mahazo famelan-keloka ny olona rehetra mino ny vidim-panavotana, noho io fifanekena io. (Vakio ny Jeremia 31:34.) Hoy i Jehovah: “Havelako ny fahadisoany, ary tsy hotsarovako intsony ny fahotany.” Manome toky antsika izany hoe tsy manao arakaraka i Jehovah, rehefa mamela ny fahadisoantsika. Tsy apoitrany indray ilay izy any aoriana any mba hanakianana na hanasaziana antsika. Avelany mandrakizay ilay izy.—Rom. 4:7, 8.
14. Nahoana no mampahery antsika ny misaintsaina momba ny famelan-kelok’i Jehovah? Manomeza ohatra.
14 Mampahery ny misaintsaina momba ny famelan-kelok’i Jehovah. Misy ohatra iray ity. Voaroaka ny anabavy iray, ary voaray indray taona maro tatỳ aoriana. Na izany aza, dia tsy tena nino izy hoe namela ny helony i Jehovah. Nihevitra izy hoe ny olon-kafa no tian’i Jehovah kokoa noho izy. Nampahery azy anefa ny namaky sy nisaintsaina an’ireo sarin-teny momba ny famelan-kelok’i Jehovah, ao amin’ny Baiboly. Tsapany fa tsy voatery hovesaran’ny fahotantsika mandra-pahafatintsika isika, rehefa avelan’i Jehovah ny helotsika. Diovin’i Jehovah tsy hisy intsony mantsy ilay loto vokatry ny ratsy nataontsika. * Hoy ilay anabavy: “Tsapako hoe tena tia ahy i Jehovah ary mbola tsy nahatsapa an’izany aho hatramin’izay!” Hoy koa izy: “Tsy tena nino aho taloha hoe afaka mamela tanteraka ny fahotako i Jehovah, ary nihevitra aho fa hiady saina foana noho ny nataoko. Fantatro fa tsy ho afaka vetivety ilay izaho manamelo-tena, kanefa manomboka tsapako izao hoe mihakaiky an’i Jehovah aho, ary toy ny hoe nisy enta-mavesatra be nesorina tamiko.” Be fitiavana sy mamela heloka tokoa ilay Andriamanitra tompointsika!—Sal. 103:9.
MIEZAHA HAMELA HELOKA TOA AN’I JEHOVAH
15. Ahoana no hanahafantsika an’ilay toetran’i Jehovah hoe mamela heloka?
15 Afaka manahaka an’i Jehovah isika, ka mamela ny heloky ny hafa, raha tena mibebaka izy ireo. (Vakio ny Lioka 17:3, 4.) Tadidio fa rehefa mamela ny helotsika i Jehovah, dia manadino an’ilay fahotana izy, izany hoe tsy mitana lolompo amintsika. Toy izany koa no tokony hataontsika, rehefa mamela heloka isika. Tsy tokony hoeritreretintsika intsony na horesadresahintsika indray ilay fahadisoana.
16. a) Tsy midika ho inona ny hoe mamela heloka? Hazavao. b) Inona no tsy maintsy ataontsika raha tiantsika ny hahazo famelan-keloka amin’i Jehovah?
16 Ny hoe mamela heloka dia tsy midika hoe mankasitraka an’ilay zavatra ratsy nataon’ilay olona tamintsika, na hoe mamela azy hanararaotra antsika. Midika kosa izany hoe manapa-kevitra fa tsy ho tezitra aminy intsony. Mila mitadidy koa isika hoe tsy maintsy mamela heloka toa an’i Jehovah isika, raha tiantsika havelany ny fahotantsika. (Mat. 6:14, 15) Mangoraka antsika i Jehovah, ka mitadidy fa “vovoka ihany isika.” (Sal. 103:14) Tsy tokony hangoraka ny hafa koa àry ve isika, ka hamela ny fahadisoan’izy ireo amin’ny fontsika manontolo?—Efes. 4:32; Kol. 3:13.
Mivavaha ho an’izay nanao zavatra tsy nety taminao, ary ataovy amin’ny fo izany (Fehintsoratra 17)
17. Inona no afaka manampy antsika, raha nisy mpiara-manompo nanao zavatra nampalahelo antsika?
17 Tsy mora foana anefa ny mamela heloka. Na ny Kristianina voahosotra sasany tamin’ny taonjato voalohany aza nahita hoe tsy mora tamin’izy ireo ny nandamina ny tsy fifanarahany. (Fil. 4:2) Inona àry no afaka manampy antsika, raha nisy mpiara-manompo nanao zavatra nampalahelo antsika? Diniho ny ohatr’i Joba. Nalahelo be izy rehefa nanendrikendrika azy i Elifaza sy Bildada ary Zofara, izay niseho ho namany. (Joba 10:1; 19:2) Nanarin’i Jehovah ireo mpanendrikendrika ireo, ary nasainy nitondra fanomezana tany amin’i Joba mba hatao fanatitra noho ny ota. (Joba 42:7-9) Na i Joba koa aza anefa nasain’i Jehovah nanao zavatra. Nasainy nivavaka ho azy telo lahy izy. Nankatò i Joba ary notahin’i Jehovah izy satria namela heloka. (Vakio ny Joba 42:10, 12, 16, 17.) Inona no ianarantsika avy amin’izany? Tsara ny mivavaka amin’ny fo ho an’ny olona nanao zavatra tsy nety tamintsika, satria hanampy antsika tsy hitana lolompo izany.
MIEZAHA FOANA HAHAFANTATRA SY HO TIA NY TOETRAN’I JEHOVAH
18, 19. Inona no hanampy antsika ho tia kokoa an’ireo toetra mahafinaritra ananan’i Jehovah?
18 Tsy hitanao hoe nahafinaritra ve ny nianatra momba an’ireo toetran’i Jehovah? Nianarantsika hoe mora hatonina izy, tsy manavakavaka, malala-tanana, mahay mandanjalanja, tsy mivadika, ary mamela heloka. Vao santatra am-bava rano ihany anefa izany, fa mbola ho afaka hianatra momba an’i Jehovah foana isika mandrakizay. (Mpito. 3:11) Tena marina ny voalazan’ny apostoly Paoly hoe: “Lalina tokoa ny harenan’Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany!” Ary tsy misy hafa amin’izany koa ny fitiavan’i Jehovah sy ny toetrany enina izay nodinihintsika.—Rom. 11:33.
19 Aoka àry isika rehetra hampitombo foana ny fitiavantsika an’ireo toetra mahafinaritra ananan’i Jehovah. Ho tiantsika kokoa ny toetrany rehefa fantatsika tsara, eritreretintsika ny fomba ampisehoany an’ilay izy, ary avy eo manahaka azy isika. (Efes. 5:1) Raha manao izany isika, dia vao mainka hiombon-kevitra amin’ny mpanao salamo, izay nihira hoe: “Izaho kosa, dia ny manakaiky an’Andriamanitra no tsara amiko.”—Sal. 73:28.
^ feh. 7 Misy soso-kevitra tsara ato amin’ireto Tilikambo Fiambenana ireto: 15 Oktobra 2011: “Miezaha ‘Hampionona An’ireo Ory’ ”; 15 Janoary 1995: “Efa Nampahery Olona ve Ianao Tato ho Ato?”; 1 Aprily 1995: “Mandrisiha ho Amin’ny Fitiavana sy ny Asa Tsara—Amin’ny Fomba Ahoana?”
^ feh. 14 Jereo ny boky Manatòna An’i Jehovah, toko 26, fehintsoratra 10.